Friday December 09, 2016 - 03:30:19 in Articles by Super Admin
Dib-u-hehiisiinta,illaalinta nabadda,degganaanshaha siyaasadda iyo dhawrista hannaanka dimuqraadiyadda oo doorasho xalaal ah loo maraa waa dariiqa ugu habboon ee lagu xaqiijin karo dawladnimo sugan ee Somalia . Dhanka kale, dagaal-oogidda, carqallad
Dib-u-hehiisiinta,illaalinta nabadda,degganaanshaha siyaasadda iyo dhawrista hannaanka dimuqraadiyadda oo doorasho xalaal ah loo maraa waa dariiqa ugu habboon ee lagu xaqiijin karo dawladnimo sugan ee Somalia . Dhanka kale, dagaal-oogidda, carqalladeynta hannaanka doorashada, ku xad-gudubka xuquuqda dimuqraadigaa ee shakhsiga/bulshada,laalush qaadashada,dhiiri-gelinta fawdhada iyo gabood-falku waa horseedka dawlad-burburka(state failure), waxaana loo aqoonsan yahay dembi caalami ah oo mudan ciqaab degdeg ah ee fulinteeda adduunku ku ballamay in wadajir la isaga kaashado.
d.Ugu yaraan 25 Kursi ee Barlamaanka Galmudug lagu soo xulay ah baa dacweysan oo hortaal Guddiga Khilaafaadka si go’aan looga gaaro.
Warbaahinta Caabudwaaq News